Arsenal oo iska xaadirisay Final-ka tartanka FA Cup-ka kaddib guul ay ka gaartay Man City kulan uu labo jeer shabaqa soo taabtay Aubameyang… + SAWIRRO – Gool FM - Idman news
Arsenal oo iska xaadirisay Final-ka tartanka FA Cup-ka kaddib guul ay ka gaartay Man City kulan uu labo jeer shabaqa soo taabtay Aubameyang… + SAWIRRO – Gool FM
(London) 18 Luulyo 2020. Kooxda reer London ee Arsenal ayaa iska xaadirisay Final-ka tartanka FA Cup-ka kaddib markii ay guul ka gaartay Manchester City, kulan labo jeer uu shabaqa soo taabtay Aubameyang.
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa goolka la horreysay, waxaana 19’daqiiqo bilowgii ciyaarta u dhaliyey weeraryahankeeda Pierre-Emerick Aubameyang, kaddib markii uu dhammaystiray karoos uu ka helay saaxiibkiis Nicolas Pepe.
Gunners oo kulankan sameysay difaacasho cajiib ah ayaa dhowr fursadoo ku heshay Man City kuwaasoo ay hoggaanka ciyaarta ku dheereysan kartay, balse uma suuro-gelin kulanka ayaana ku soo dhammaaday 1-0 looga gacan sarreeyey kooxda uu hoggaamiyo Tababare Pep Guardiola.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Man City ayaa ku dhowaatay inay goolkaas iska soo barbareyso balse ma dhicin, waxaana la aaday aalladda VAR kaddib markii Mustafi uu qalad ku galay Sterling oo ku jiray xerada ganaaxa ee Gunners, waana laga diiday in loo dhigo rigooradaas.
Arsenal ayaa hoggaanka ciyaarta sii dheereysatay waxaana markale shabaqa soo taabtay 71’daqiiqo Pierre-Emerick Aubameyang, kaddib markii uu caawin qurux badan ka helay Kieran Tierney kubbad dabo mareyn ahayd oo Man Cit la gaaday maadaama ay weerar ku maqnaayeen, waxaana ciyaarta laga dhigay 2-0 ay ku gacan sarreysay Gunners.
Manchester City ayaa dhowr jeer isku dayday inay goolashaas iska soo celiso balse daafaca Arsenal ayaa iska diiday sheekadaas, waxaana kulanku uu ku soo dhammaaday 2-0 ay ku adkaatay Arsenal.
Arteta ayaa garoonka Wembley ku garaacay Guardiola, waxaana uu Final-ka FA Cup-ka ku sugayaa kooxdii soo adkaata habeen dambe Manchester United iyo Chelsea.
Previous Shaxda rasmiga ah kulanka Arsenal iyo Man City oo la shaaciyey… (Auba & Laca oo ku wada bilowday safka Gunners) – Gool FM
Next Kulamada CAAWA laga ciyaarayo Yurub iyo saacadaha ay soo galayaan – Gool FM
Lix Siyaabood oo aad uga hortagi karto Bidaarta
Toddoba qof oo ajnabi ah oo ka tirsan Daacishta Somalia oo la qabtay + Magacyada June 25, 2022